I-Ivy's Fish Lab(PRIVATE BEACH) - I-Airbnb
I-Ivy's Fish Lab(PRIVATE BEACH)
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguOlmo
Le villa ngokwenyani yindlu yokugqibela emazantsi elunxwemeni lolwandle lwaseMexico. Ngowona mmandla uzimele kakhulu kwaye ngenxa yoko sintywiliselwe kubuhle bendalo kunye nezilwanyana zasendle. Ukujonga iintaka, ukuloba, ukuhamba nge-snorkeling, i-kayaking, i-scuba diving, ukukhwela intaba ukufikelela ngokulula kwi-Chetumal bay eyindawo yokugcina i-manatee kwi-canal de Zaragoza. Yiza uzonwabele iholide yakho! Sinephenyane elinokukusa kanye ukusuka kwindlu yethu ukuya naphi na kuqaqa.
Inxalenye yolwandle oluphambi kwendlu yethu kulapho abalobi basekuhlaleni beza kubamba ukutya kwaselwandle. Kananjalo silapha ecaleni kwendawo apho ukhenketho lwabalobi beempukane luqhele ukwenziwa khona. Sibamba ukutya kwaselwandle yonke imihla kwaye sinika iindwendwe zethu imenyu esekwe ekubambeni kwethu okutsha kunye nemfundo yethu ekhethekileyo yokupheka. Yonke imifuno, imifuno kunye nekhokhonathi esiyisebenzisayo ivela kwigadi yethu yendalo yendalo.
Sibuze malunga neepakethe zokuloba iindiza esinokukunika isivumelwano malunga nokhenketho kunye nokutya.
Iibhedi ezinkulu eziyi-2, ibhedi elala umntu omnye eyi-1, isofa ekwayibhedi eyi-1, imatrasi ebekwa phantsi eyi-1, Iibhedi ekuthiwa zii-hammock eziyi-2
Iintsuku eziyi-7 e Xcalak
4.38 · Izimvo eziyi-9
I-Xcalak yilali encinci yokuloba enabantu abamalunga nama-300. ibekwe kwincam yokugqibela ye-Mexican Caribbean. IReef isacocekile kwaye namanzi acwengile kwaye azolile. IReef ephambi kwedolophu iphezulu kwaye ikhusela ulwandle kunye nezilwanyana zaselwandle. Ngaphakathi kolwalwa akukho nzulu kwaye kukulungele ukuntywila okukhuselekileyo kunye nokuntywila emanzini. Amachibi kunye netheku kunye nemilambo ejikeleze le dolophu iyenza iparadesi ezele bubomi.
Umbuki zindwendwe ngu- Olmo